Okezie Ikpeazu Archives - NDỊ IGBO KWENU
Home / Tag Archives: Okezie Ikpeazu
Abia Steeti kụkasịrị ụlọ anọ ndị ntọrọ mmadụ ji arụ-ọrụ
April 21, 2016	Ala Igbo 0
Ndị ọchịchị Abia Steeti n’izu ụka gara-aga gbakashịrị ụlọ anọ ndị ntọrọ mmadụ ji arụ-ọrụ dị na Etitiama Mkporo n’ime Ohafia Local Government Area. Ụlọ anọ a dị be ndịbe Ndinkefa n’ime Amafo, Mkporo, bụ ebe ndị ntọrọ mmadụ na edebe ndị ha si Aba tọrọ. Mana dịka ndị igbo ...
Abia Steeti ga-akọ osisi akwu ruru nde 7.5 tupu afọ atọ agaa.
April 19, 2016	Ala Igbo, AZỤMAHỊA, Featured 1
Ndị ọchịchị Abia Steeti amalitela njem ilaghachi n’ọrụ ugbo. Ha zubere ịkọ osisi akwu ruru nde 7.5 tupu afọ atọ agaa. Ha zubere ibanye ọrụ ugbo buru ibu. Commissiona ọrụ ugbo na Abia Steeti, Uzo Azubike, kwuru sị na ebumnuche ha bụ ịkọ akumaku n’aga ahịa ụwa nile na-anabata. “ ...